Guddiga Madaxabannan ee Doorashooyinka Qaranka oo kulamo wadatasho la yeeshay Jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool Minnesota. – GMDQ
Guddiga Madaxabannan ee Doorashooyinka Qaranka oo kulamo wadatasho la yeeshay Jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool Minnesota.
Wafdi ay hogaaminayso Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Xaliima Ismaciil Ibraahim ayaa maalmahan ku guda jiray kulamo wadatashi oo ay la qaadanayeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyink Minneapolis Washington iyo Virginia ee dalka mareykanka.
Kulamadan ayaa looga hadlayay Geedi-socodka hanaanka Doorashada 2020ka iyo caqabadaha horyala sidii looga gudbi lahaa. Xoghayaha Guud ee Guddiga Doorashooyinka Dahir mire Jibriil oo ka hadlay furitaankii shirarka wadatashi ayaa sheegay in Guddiga Doorashada ay dadaal badan ku bixiyeen sidii dadka soomaaliyeed fursad siman loogu siin lahaa wadatashiyada dadweyne ee saddexdii bilood ee u dambeysay uu Guddigu ka waday dalka gudihiisa, wuxuuna sidoo kale sheegay in ay muhiim u arkeen in dadka soomaaliyeed ee qurbaha ku nool fursad loo siiyo in ay taladooda ku biirayaan wadatashiyadan.
Qaybaha bulshada soomaaliyeed ee ka qaybgalay kulamadan ayaa muujiyay sida ay muhiim u tahay in awoodda dawlanimada dalka dib loogu celiyo shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay rabitaankooda ku doortaan hogaamiyeyaashooda heerarkiisa kaladuwan, waxay sheegeen in loobaahanyahay in ka dhabaynta hirgalinta Doorasho qof iyo cod ah ay u bahantahay dadaal badan oo aan dawlada soomaaliyeed kaliya lagu halleyn balse dadka soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda kunool ay kaalin muuqata ka qaataan.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaran Xaliimo Ismaaciil Ibraahim ayaa sheegtay in Guddiga Daraasado badan ka sameeyay sidii Soomaaliya ay Doorashado xor ah uga dhici lahayd madaama ay jiraan wadamo ku jira xaalado lamid ah tan soomaaliya oo kale ah islamarkaasna ay doorashooyinka xor ah ka dhaceen. Waxay sidoo kale sheegtay in Guddigu diyaargarow fiican sameeyay balse ay jiraan arrimo loo baahanyahay in xoogga la saaro sida arrimaha shuruucda, amniga iyo siyaasadda kuwaas oo looga baahanyahay in hay’ada dastuuriga ah ee u xilsaaran ay diyaariyaan.
Waxaa la faafiyey March 17, 2018 August 16, 2018